Nezvedu - Qingdao Topwell Chemical Zvekushandisa Co., Ltd.
Qingdao Topwell Chemical Zvekushandisa Co., Ltd. yakagadzwa muna2014, inyanzvi yekutengesa inoita mukutsvagisa, kutengesa uye yakagadzirirwa yakasarudzika pigment uye dhayi izvo zvine hukama nemhando dzechiedza- UV mwenje, padyo nemwenje wechiedza (IR), mwenje unooneka.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira,
1. UV / IR fluorescent pigment uye dhayi,
2. Pedyo nemuchina unotora dhayi
3. Photochromic dhayi uye pigment,
4. Dhayi rinoonekwa
Isu tinopa uye tinogadzira aya dhayi uye pigment, fotochromic madhayi eiyo lens lens uye hwindo kana mota firimu, yakakwira fluorescent dhayi yegreen imba firimu uye mota yakakosha zvikamu, refu pfupi UV fluorescent pigment uye IR pigment yechengetedzo indasitiri yekudhinda, padyo infrared inonaya dhayi , yebhuruu mwenje inonamira, firita dhayi, kemikari yepakati, inoshanda dyestuffs, inonamira madhayi.
Chinonyanya kukosha, tinoita akasiyana makemikari akanaka uye madhayi akasarudzika akagadziriswa ekugadzirisa uye epamberi masevhisi, nepo zvakavanzika zvakavanzika kune vatengi.
Zvigadzirwa zvedu zvinotengesa mushe muUSA, Germany, France, Brazil, Japan, nedzimwe nyika kana matunhu. Isu takakurumbira yemhando yepamusoro, yemakwikwi mitengo, yekutanga-kirasi craftworks, yakachengeteka pasuru, uye nekukurumidza kuendesa.
Isu tinogamuchira nemoyo wese shamwari kubva pasirese kuti vashanyire kambani yedu uye vashande pamwe nesu pahwaro hwekugara kwenguva refu mabhenefiti.